Digital Patrika – जनता एउटै प्रवृत्ति भएका पार्टीहरुले गरेको रजाईबाट आजित भइसकेका छन्
जनता एउटै प्रवृत्ति भएका पार्टीहरुले गरेको रजाईबाट आजित भइसकेका छन्
Nov 30, 2017digitalpatrikaअन्तर्वार्ता0
प्रेम र सत्यताले परिवर्तित हृदय नै परिवर्तन सहितको नवयुगको शुरुवात हो । आध्यात्मिक र भौतिक विकास नै सन्तुलित विकास हो भन्ने नाराका साथ आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालले पनि प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट आफ्ना उम्मेद्वारहरु चुनावी मैदानमा ल्याएको छ । एक सामाजिक अभियन्ताका साथै पार्टीको संस्थापक महिला सदस्य प्रतिनिधि सभा सदस्यमा समानुपातिक उम्मेद्वार अष्टमाया लामासँंंग समग्र देशको चुनावी गतिविधी र उनको पाटीको बिषयमा केन्द्रीत रहेर पछिल्लो समय हामीले गरेको कुराकानी ।
चुनावी माहोल अत्यन्तै तातेको छ ? मतदाता सँगको भेटघाटको समय कसरी मिलाउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको चुनाव अत्यन्तै संघारमा आइसकेको छ । हाम्रो पार्टी आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालले नै तय गरेको कार्यक्रम अनुसार हामी उम्मेद्वार र कार्यकर्ताहरु भोट माग्न घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त छौं । हामी जनताको माझ गएर हाम्रो पार्टीका एजेण्डाहरु सहित प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैमा हृदय चिन्हमा भोट दिन आग्रह गरिरहेका छौं ।
मतदाताले तपाईको आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपाललाई नै भोट किन दिने ? के के छन् तपाईहरुका चुनावी एजेण्डाहरु ?
देशमा विभिन्न राजनीतिक चरणहरु पार गर्दै अहिले यो अवस्थासम्म आएको छ । हाम्रा प्रतिवद्धता र योजनाहरु भनेका आध्यात्मिक र भौतिक विकास नै सन्तुलित विकास हो । नागरिकहरु सुखी जीवन र शान्तिपूर्ण रुपमा समाजमा बाँच्न पाउनु पर्दछ । धर्मको रुपमा विभेद गर्न पाइदंैन र यसलाई धर्म निरपेक्षता अक्षरस लागू गरिनुपर्दछ । महिला हकहितको रक्षा गरिनुपर्दछ । महिलाहरुको गर्भपतन गराउने जुन कार्य छ यो पूर्ण रुपमा रोकिनु पर्दछ, शिक्षा स्वास्थ्यमा हुँदै आएको विभेद अन्त्य हुनुपर्छ, युवा जनशक्तिलाई राष्ट्र निर्माणमा लगाइनु पर्छ, पन्चायत कालदेखि अहिलेसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरुको अकुत सम्पत्ति सार्वजनिक गरिनुपर्छ, धुँवा धुलोले आक्रान्त भएको राजधानीको मुहार फेरिनुपर्छ, सत्तरी बर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धालाई सरकारले सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रममा राखेर पाल्नुपर्छ, सीमामा तारवारको व्यवस्था गरिनुपर्छ र देशलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाइनु पर्ने एजेण्डा सहित हामी चुनावी मैदानमा ओर्र्लिएका छौं । जनता एउटै प्रवृत्ति भएका पार्टीहरुले गरेको रजाईबाट आजित भइसकेका छन् र विकल्पमा हामीलाई भोट दिन्छन् भन्नेमा हामी ढुक्क छौं ।
तपाईको आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी नेपालले राखेका एजेन्डाहरु पूरा हुने आधारहरु के के छन् ?
देशको विकासका लागि औद्योगिक क्रान्ति, पूर्वाधार विकास, जनउत्तरदायी सरकारको निर्माण गरि अब भष्टाचार रहित सभ्य समाज निर्माण गरिनु पर्दछ भन्ने हाम्रो पार्टीको मूल एजेण्डाहरु हुन् । मतदाताले अव राम्रोसँग बुझ्नु हुन्छ कि अबको देश समृद्धि र विकासका लागि यस्ता कुरा अत्यावश्यक छन् । त्यसैले उहाँहरुले यो कुरालाई मनन गरि यसपटक हृदय चिन्हमा भोट दिएर काम गर्ने मौका हामीलाई दिनु हुन्छ ।
मतदाताको घर दैलोमा पुग्दा कस्ता प्रतिक्रिया पाउनु हुन्छ । जनताको समस्या, माग र आवश्यकता कस्ता पाउनु हुन्छ ?
स्वाभविक रुपमा मतदाताहरुले सडकदेखि विभिन्न पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाई र सेवाको माग र समस्या देखाउनु हुन्छ । यो सँगसगै हामीले अबको आवश्यकता भनेको चेतना, आस्था विरुद्ध बनाएका कानुनको खारेजी, शिक्षा, स्वाथ्य जस्ता क्षेत्रमा भएको भेदभाव अन्त्य, सबै धर्मको रक्षा, धार्मिक गुठिको व्यवस्थापन गर्ने जस्ता नागरिकसँग नजिकको कुराहरुका बारेमा आवाज उठाएको हुँदा सकारात्मक प्रतिक्रिया र हामीप्रतिको सद्भाव पाएका छौं ।
तपाईको पार्टीलाई क्रिस्टियनहरुबाट परिचालित छ भन्ने आरोप लाग्छ नि ?
आरोप लगाउनेहरुले जस्ता कुरामा पनि आरोप लगाउँछन् । हामीले उठाएका कुराहरुमा आध्यात्मिक र भौतिक विकास नै सन्तुलित विकास हो । नागरिकहरु सुखी जीवन र शान्तिपूर्ण रुपमा समाजमा बाँच्न पाउनु पर्दछ । धर्मको रुपमा विभेद गर्न पाइदैन र यसलाई धर्म निरपेक्षता अक्षरस लागू गरिनुपर्दछ । हामी कसैसँग परिचालित भन्दा पनि नवयुगमा प्रेम र सत्यताले परिर्वतन गर्नु पर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
एउटा महिला जनजातिबाट समानुपातिक उम्मेदवारका रुपमा आउनु भएको छ । धेरै महिलाहरु उत्पीडिन, विभेदमा छन् भनिन्छ यसको परिर्वतनको लागि तपाइको सोच के छ ?
परम्परागत देखि नै महिलाहरु विभिन्न चेपुवामा परेका छन् । हाम्रो हक, अधिकारकालागि हामी आफंै सचेत र चनाखो हुनु जरुरी छ । अलिकति शिक्षा र चेतनाको पनि कमी भएको हो । यस्ता कुरामा हामी आफंै अगाडि आउनु पर्छ । अहिले त संविधानले पनि महिलाका विषयमा विभिन्न अधिकारहरु प्रत्योजन गरेको छ यी कुरा सबै महिला, पीडित, गरिव र एकल महिलामा समान रुपमा पुग्नु पर्दछ । म एउटा महिला जनजाति पनि भएको नाताले म उहाँहरुको हक हित र चेतनाका लागि लड्नु पर्दछ भन्ने मेरो सोच छ ।